အပြစ်အနာဆာကင်းစင်တဲ့ မျက်နှာလေးကို ပိုင်ဆိုင်ဖို့ Double cleansing လုပ်ကြစို့ | OnDoctor
အပြစ်အနာဆာကင်းစင်တဲ့ မျက်နှာလေးကို ပိုင်ဆိုင်ဖို့ Double cleansing လုပ်ကြစို့
By OnDoctor Editor	 On May 17, 2019 Last updated Nov 16, 2019
ကဲကဲအားလုံးပဲ Beauty tutorial တွေ၊ မိတ်ကပ် skincare tutorial တွေကြည့်ရင် Double cleansing / Triple Cleansing ဆိုတဲ့ စကားလုံးတွေနဲ့ မစိမ်းလောက်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်ရှင်။ ဒါပေမဲ့ ခက်တာက Double cleansing/ Triple cleansing ဆိုတာ ဘာလဲပေါ့??
ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒီ နည်းလမ်းလေးက မိတ်ကပ်တွေနဲ့ နေ့တိုင်းထိတွေ့နေရတဲ့ မင်းသား မင်းသမီးတွေ မော်ဒယ်လ်တွေရဲ့ အခြေခံအကျဆုံး အသားရည်ထိန်းသိမ်းနည်း ထဲကတစ်ခုပါရှင်။ ကိုးရီးယား Cele တွေ မိတ်ကပ်တွေလဲနေ့တိုင်း လိမ်းတယ်။ ဒါပေမဲ့လဲ အမြဲလှနေတယ်ဆိုတာ ဒီလျှို့ဝှက်ချက်ကြောင့်ပါရှင်။
တော်တော်များများ လွဲနေတာလေး တစ်ခုနဲ့စချင်ပါတယ်။ ခုခေတ်မှာ လူတိုင်းက မိတ်ကပ်လိမ်းနေကြပါပြီ။ ကျောင်းသွားရုံးသွား လိမ်းကြတယ်။ နောက်ဆုံး မိတ်ကပ်မလိမ်းဘူးဆိုရင်တောင် BB cream ,သနပ်ခါး အစရှိသဖြင့် လိမ်းနေကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပြန်ပြီး သေချာသန့်စင်ဖို့မှာ အားနည်းကြတယ်။
တစ်ချို့ကျတော့လဲ Micellar water လို့ခေါ်တဲ့ မျက်နှာ ပြန်သစ်စရာ မလိုတဲ့ မိတ်ကပ်ဖျက်ဆေးနဲ့ပဲ ဖျက်ကြတယ်။ ကြော်ငြာအားကောင်းတာလဲ ပါတာပေါ့လေ။ ဒါပေမဲ့ ဒီရဲ့ Cleansing water / micellar water တွေက အပေါ်ယံမိတ်ကပ် တွေကိုသာ သန့်စင်နိုင်ပေမဲ့ ချွေးပေါက်ထဲမှာရှိတဲ့ မိတ်ကပ်တွေကို မသန့်စင်ပေးနိုင်ပါဘူးရှင်။
အဲ့ဒါကြောင့် Cleansing တော့လုပ်တယ် ဒါပေမဲ့ ဝက်ခြံတွေ အဆီဖုတွေ စတဲ့ မလိုလားအပ်တဲ့ ပြသနာတွေနဲ့ စိတ်ညစ်ရတာပေါ့။
ဒါဆို မိတ်ကပ် သနပ်ခါး စတာတွေ အမြဲစွဲလိမ်းတဲ့မမတွေ မိတ်ကပ်ဖျက်ဖို့ ဘာသုံးရမလဲ??
ပထမဆုံးမိတ်ကပ်ဖျက်မယ် ဆိုတာနဲ့ ချွေးပေါက်ထဲမှာထိပါ ကျန်ရှိနေတဲ့ မိတ်ကပ်တွေပါ ပျော်ဝင်ပြီး သန့်စင်စေနိုင်တဲ့ Cleansing cream or gel or oil or balm ကို သုံးရပါမယ်။ စက်ဝိုင်းပုံစံ အပေါ်ကိုပင့်တင်တဲ့ပုံစံလေး ပွတ်ပေးရပါမယ်။ အရေးကြီးတာက တစ်မိနစ်ထက် မကျော်ပါစေနဲ့။ တစ်မိနစ်ထက် ကျော်သွားရင် ချွေးပေါက်ထဲက ပျော်ထွက်လာတဲ့ မိတ်ကပ်နဲ့ အညစ်ကြေးတွေကို အရေပြားက ပြန်လည်စုပ်ယူသွားတတ်လို့ပါရှင်။
ပြီးရင် Wet tissue နဲ့သုတ်ပစ်ပါ။ နောက်တစ်ကြိမ် ဒီ Cleansing cream or gel or oil or balm နဲ့ နောက်တစ်ကြိမ် ထပ်သန့်စင်ပါ။ ဒီတစ်ခေါက်လဲ wet tissue နဲ့သုတ်ကြည့်ပါ။ မိတ်ကပ် အကြွင်းကျန်တွေ ထွက်လာတာတွေ့ရမှာပါရှင်။
ဒီလို ၂ ကြိမ် မိတ်ကပ်သန့်စင်ပြီးပြီ ဆိုမှ မျက်နှာသစ်ဆပ်ပြာ facial foam နဲ့မသစ်ချင်ရင် micellar water နဲ့ သန့်စင်ပေးနိုင်ပါတယ်ရှင်။
နောက် Facial foam အသုံးပြုမယ်ဆိုလဲ အကြမ်းတစ်ကြိမ် အချောတစ်ကြိမ် ၂ ကြိမ်သစ်ပေးပါ။ ဒီလို ၂ ခါသန့်စင်တာကို Double Cleansing လို့ခေါ်ပါတယ်ရှင်။
မိတ်ကပ်တော့လှလှလေး အချိန်ပေးပြီးလိမ်းတယ်။ ပြန်ဖျက်ရမှာကျတော့ ပျင်းကြတယ်။ အဲ့လိုလုပ်လို့မရပါဘူး။ မိတ်ကပ် ပြန်ဖျက်တဲ့အခါမှာလည်း အခြေခံအကျဆုံး မျက်နှာ သန့်ရှင်းရေးကို အပေါ်မှာ ပြောခဲ့သလို သေချာ အချိန်ပေးပြီး လုပ်ပါမှ အပြစ်အနာဆာ ကင်းတဲ့ မျက်နှာလေးကို ပိုင်ဆိုင်မှာပါ။
ဝက်ခြံ အဆီဖု စတဲ့ အရေပြား ပြသနာအများစုက မိတ်ကပ်ပစ္စည်း skincare စတာတွေနဲ့ မတည့်လို့ ဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ အဓိကက သေချာ cleansing မလုပ်ကြလို့ပါ။
ကဲ ခုတော့ Double Cleansing လေးလုပ်ပြီး အပြစ်အနာဆာကင်းစင်တဲ့ မျက်နှာလေးကို တူတူပိုင်ဆိုင်ကြရအောင်နော်။
Scarlette ( ဆေး၁ )
ဆယ်ကျော်သက်တို့အတွက် မှန်ကန်တဲ့ အသားရည်ထိန်းသိမ်းနည်း
ကျန်းမာရေးနဲ့ အသားအရေအတွက် အကျိုးပြုတဲ့ Manuka ပျားရည်နဲ့ ရိုးရိုးပျားရည်…